Erwin Schrödinger: akụkọ ndụ, ihe egwu na ihe mgbagwoju anya nke pusi | Netwọk Mgbasa Ozi
Akụkọ ndụ na uru nke Schrödinger
N'etiti ndị ọkà mmụta sayensị raara onwe ha nye kwantum physics, otu n'ime ihe ndị a ma ama nke pọdkastị a ma ama bụ Schrodinger. Aha ya nile bụ Erwin Rudolf Josef Alexander Schrödinger bụ onye ọkà n’ihe ọmụmụ physics nke Ọstria a mụrụ na Vienna n’abalị iri na abụọ nke ọnwa asatọ n’afọ 12. E nyere ya Paul Dirac, ihe nrite Polish Nobel nke ihe ọmụmụ physics a na-akpọ Schrödinger akụkụ. Onyinye Nobel ya nyere na 1887 na ọnụ ọgụgụ kachasị elu nke ọrụ ya dị ka ọkà mmụta sayensị.
N'isiokwu a, anyị ga-agwa gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara akụkọ ndụ mmadụ na ihe nkịta Schrödinger.
1 Schrödinger biography
2 Dị Physics na Ọganihu Quantum
3 Nwamba Schrödinger
4 Nkọwa nke paradox
Ọ bụ physics bụ onye si na mmalite nke piịnsịsị physics ma ama ya maka nnwale echiche ya dị ịtụnanya. Ihe a nile malitere n'ihi akwụkwọ ozi ya na Albert Einstein nwere na 1935. Ọ natara doctorate ya na usoro iwu physics site na Mahadum Vienna na 1910. Ọ bụ onye sonyere na Agha Worldwa Mbụ dị ka onye na-ahụ maka ogbunigwe na 1914.
E bipụtara isiokwu dị iche iche na Annals of Physics magazine banyere nsogbu metụtara ọnụọgụ nke ndị amaala. Ozugbo ọ kọwachara akụkụ ahụ na ndị otu ebigharị, ọ ghọrọ akụkụ Schrödinger. Ka oge na-aga ọ hapụrụ Germany gaa England n'ihi Ọchịchị Nazi na mgbochi Semitism. Ọ bụ na Mahadum Oxford ka ọ nwetara Nrite Nobel.
Mgbe e mesịrị, na 1936, ọ laghachiri Austria ịrụ ọrụ na Mahadum Graz.
Dị Physics na Ọganihu Quantum
Na usoro ihe ntaneti, ị nweghị ike ịma kpọmkwem uru nke oke na-enweghị ịtụle ya mbụ. Mgbakọ na mwepụ tiori na-akọwa a steeti site torque, ọsọ na ọnọdụ na zuru nkenke. Agbanyeghị, ọrụ ebili mmiri ka mma site na nke enwere ike gbakọọ ihe gbasara nke puru ịchọta mkpụrụ ahụ n'otu oge na oge ụfọdụ. Ya mere, ọdịdị nke puru omume na kwantum arụzi ike ịkọ na ahụ na-ebili mmiri na isi na ọ bụghị naanị ihe.
N'etiti okwu Schrödinger anyị na-ahụ paragraf a nke na-ekwu ihe ndị a:
«A mụrụ m na gburugburu ebe obibi, amaghị m ebe m si ma ọ bụ ebe m na - aga ma ọ bụ onye m. Nke a bụ ọnọdụ m dịka nke gị, maka onye ọ bụla n'ime gị. Eziokwu ahụ bụ na nwoke ọ bụla anọwo n'ọnọdụ a ma na-akụziri m ihe ọ bụla. Ihe niile anyị nwere ike inyocha onwe anyị gbasara ajụjụ na-ere ọkụ gbasara mmalite na akaraka anyị, nke a bụ gburugburu. Ọ bụ ya mere ha ji achọsi ike ịchọta n'ime ya ihe niile anyị nwere ike. Nke a bụ ihe sayensị, ihe ọmụma, ihe ọmụma bụ ezigbo isi mmalite nke mbọ ime mmụọ niile nke mmadụ.
Anyị na-anwa ịchọpụta ihe anyị nwere ike gbasara gbasara mbara igwe na anụ ahụ ebe a mụrụ anyị, anyị na-achọta onwe anyị. Na mgbalị a, anyị na-achọta ọ joyụ, anyị na-ahụ ya nke ọma ».
Mgbe ọganihu niile dị na sayensị nke Schrödinger nyere, enwere otu nke amaara ama nke ka dịkwa taa. Ọ bụ maka pusi Schrödinger. Ọ bụ ihe mgbagwoju anya kachasị ewu ewu na fisị physics. Ọ nwere ọdịiche dị iche iche. Ka anyị hụ ihe ha bụ: Erwin Schrödinger tụpụtara ya na 1935 na nyocha echiche nke na-egosi anyị otu esi agbagha kọntaktị ụwa.
Ngwurugwu na-amalite site na ichetụ nwamba n'ime igbe zuru oke. N'ime ya ka arụnyere usoro nke na - ejikọ ihe nyocha elektrọn na hama. N'okpuru n'okpuru hama ka a na-etinye iko iko ahụ na ọgwụ nke na-egbu egbu na pusi. Ọ bụrụ na onye nchoputa ahụ eburu eletrọn, ọ nwere ike ịgbalite usoro nke na-eme ka hama daa ma gbajie vial nke nsi.
Mgbe ahụ ọkụ eletrik na-agbapụ, na n'ụzọ ezi uche dị na ya ọtụtụ ihe nwere ike ime. Nke mbu, onye nchoputa nwere ike iburu electron ma mee ka usoro maka hama daa ma wepu nsi. Ọ bụrụ na onye nchoputa na-eburu eletrọn, ọ ga-ezu iji rụọ ọrụ ahụ. N'okwu a, ọphu ọ dụdu anwụhu. Mgbe anyị meghere igbe taa, anyị ga-ahụ nwamba nwụrụ anwụ.
Ihe ọzọ nwere ike ime bụ na electron na-ehulata ụzọ ọzọ na onye nchoputa anaghị ejide ya. N'ụzọ dị otú a, usoro ma ọ bụ anaghị arụ ọrụ na kalama anaghị agbaji. Nke a bụ otú pusi ka dị ndụ. N'okwu a, mgbe ị meghere igbe ahụ, anụmanụ a ga-apụta dị mma ma dị mma.
Ruo ugbu a ihe niile bụ ihe ezi uche dị na ya. Emechakwa, ọ bụ nnwale na Have nwere 50% ohere na anụmanụ ga-ejedebe dị ndụ ma ọ bụ nwụrụ anwụ. Kaosinadị, kọnatịkị physics megidere ọgụgụ isi anyị.
Nkọwa nke paradox
Ihe electron a bu ife na irighiri ihe. Iji ghọta nke ọma ka anyị mata na elektrọn na-agbapụ ka mgbọ ma n'otu oge ahụ dịka ebili mmiri. Ya na ebili mmiri ahụ nke na-akpụ mgbe anyị tụbara okwute n’olulu. Ya bụ, ọ nwere ike were ụzọ dị iche iche n’otu oge. Agunyeghi ha, kama ha ghaghachitere dika ihe ndi ozo gha adaba na ọdọ mmiri. N'ihi ya, ọ na-ewe ụzọ nchọpụta ma n'otu oge ahụ ọ na-ewekwa ụzọ ọzọ.
Ọ bụrụ na achọpụtara electron, pusi ahụ ga-anwụ. N'otu oge ahụ, a gaghị achọpụta ya ma ọ ka dị ndụ. Na atọm atom, anyị na-ahụ na ma puru omume na-emezu n'otu oge na anyị amaghị ma ọ bụrụ na anụmanụ na-ejedebe ndụ ma ọ bụ nwụrụ anwụ n'otu oge. Obodo abụọ a hà nhata ma nwekwaa ike. Agbanyeghị, mgbe anyị mepere igbe ahụ anyị na-ahụ naanị nwụrụ anwụ ma ọ bụ ndụ.
Ọ bụrụ na ohere abụọ ahụ bụ eziokwu ma bụrụ eziokwu, gịnị kpatara anyị ji ahụ naanị otu? Nkọwa bụ nnwale ahụ metụtara iwu nke piịnsịis physics. Agbanyeghị, pusi abụghị usoro kwantum. Ma ọ bụ na mpempe physics mere na subatomic n'ọtụtụ na naanị n'okpuru ụfọdụ ọnọdụ. Ya bụ, naanị maka ụfọdụ ihe dịpụrụ adịpụ. Mmekọrịta ọ bụla na gburugburu ebe obibi na-eme ka iwu nke kutusị physics ghara ịdị na-emetụta.
Otutu ihe na emekorita onwe ha, ya mere, enweghi ike itinye otutu ihe na ezigbo uwa ma buru ibu dika o na eme na ihe omuma nke anumanu a. Ma ọ bụ na ị gaghị etinye iwu ndị a mgbe ọ dị ọkụ. Pusi na-ekpo ọkụ ma anyị, site na imeghe igbe iji hụ nsonaazụ ya, na-emekọrịta ma na-emerụ ule ahụ. Nanị eziokwu nke ikiri na-emetọ nnwale ahụ ma kọwaa ihe dị adị ma e jiri ya tụnyere ndị ọzọ.
Enwere m olile anya na iji ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere Schrödinger na ọrụ ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Akụkọ ndụ na uru nke Schrödinger